Xog: Qoor Qoor oo shuruud ku xiray fulinta QORSHAHA cusub ee DF Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Xog: Qoor Qoor oo shuruud ku xiray fulinta QORSHAHA cusub ee DF...
Xog: Qoor Qoor oo shuruud ku xiray fulinta QORSHAHA cusub ee DF Soomaaliya
Muqdisho (Caasimada Online) – 26-kii bishan oo ku beegnayd Sabtidii waxaa lagu balansanaa in xarumaha dowlad goboleedyada dalka ay ka bilaabato diiwaan gelinta musharaxiinta golaha Aqalka Sare oo ku eg 29-ka bishan, sida ku cad jadwalka uu dhawaan soo saaray guddiga lagu muran sanyahay ee doorahada.
Xog ay heshay Caasimada Online ayaa sheegeysa in madaxweynaha Galmudug uu ka biya diiday in maamulkiisu uu hadda gudaha galo doorashada xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka.
Qoor Qoor ayaa shalay gaaray Garoowe, halkaasi oo uu uga qeyb gelayo shir looga hadlayo arrimaha doorashada, kaas oo ay isugu imaanayaan inta badan dhinacyada isku haya doorashada dalka, sida madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, Galmudug, guddoonka labada Aqal ee baarlamaanka federaalka iyo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah.
Madaxweynaha Galmudug ayaa la sheegay in Villa Somalia ay cadaadis ku saartay in uusan ka qeyb gelin shirkaas, taas bedelkeedna uu maamulkiisu dedejiyo doorashada xubnaha golaha Aqalka Sare ka soo gelaya deegaanada Galmudug.
Hasa yeeshee Qoor Qoor ayaa iska diiday dalabka dedejinta ah ee Villa Somalia, waxuuna ku adkeystay in go’aanadiisa uu ku saleyn doono wixii la isku afgarto ee kasoo baxa shirka ka dhici doona Garowe.
Maalmihii dambe madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa ku sugnaa magaalada Gaalkacyo, waxayna gaareen heshiisyo ay ka mid ahaayeen inay xal u raadiyaan khilaafka ka taagan doorashada, taasi oo macnaheedu yahay in haddii uu Qoor Qoor guda galo doorasho uu jebinayo heshiiskaas.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu amray in la qabto doorashada dalka, ayada oo lagu billaabyo xildhibaanada Aqalka Sare, xilli aan weli xal laga gaarin tabashooyinka ay qabaan maamullada qaar iyo mucaaradka.
Doorashada Aqalka Sare ayaa la sheegay in ay ka billaaban doonto magaalada Baydhaba, kadibna lagu cadaadin doono madaxda Galmudug iyo HirShabelle, si ay ugu xijiyaan Dhuusamareeb iyo Jowhar, waxaana magaalooyinkaas qaarkood la geyn doonaa ciidan kale oo dheeraad ah.